Articles tagged 'zimbabwe electricity transmission and distribution company'
Mom gets $15k over son's electrocution 21 July 2017 HARARE - The family of an eight-year-old boy killed by electrocution after falling into a pit with exposed electrical cables reached a $15 000 settlement with the Zesa Holdings' subsidiary Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC) in a wrongful-death lawsuit. Constance...
Power utility fails to pay Eskom, HCB 15 September 2016 HARARE - The Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC) has said it is failing to service its payment obligations to South Africa's Eskom and Mozambique's Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) due to a $1 billion debt the firm is owed by consumers. ZETDC managing directo...
Efficient power use to save Zim $115m 8 January 2014 HARARE - Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC) — a subsidiary of power utility Zesa Holdings — says the country could save up to $115 million annually through efficient power demand side management. Demand side management is the planning, implementation and monitor...
ZETDC employees up for $20 000 theft 16 August 2013 HARARE - Two Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC) employees were yesterday arraigned before the courts on charges of theft. They allegedly stole equipment worth more than $20 000. Jerifanos Singende and Shandirai Zongororo were not asked to plead when they appe...